सामाजिक क्लवलाई सरसफाई सामग्री, मन्दिरको सिलान्यास - Radio Bhairavi 88 MHz
सामाजिक क्लवलाई सरसफाई सामग्री, मन्दिरको सिलान्यास
विदुर– युवाहरुलाई सामाजिक काममा सक्रिय गराउने उद्धेश्यले नुवाकोटको एक सामाजिक कलवलाई सरसफाई सामग्री प्रदान गरिएको छ । विदुर नगरपालिका वडा नं. १ स्थित त्रिशूली सामाजिक क्लवलाई वडाध्यक्ष लेनिन रञ्जितले सरसफाई सामाग्रीहरु उपलब्ध गराएका हुन् ।
त्यस क्रममा क्लव र स्थानीयवासीको सक्रियतामा त्रिशूली बजारको सरसफाई समेत गरिएको छ । त्रिशूली सामाजिक क्लब र त्रिशूली बजारका स्थानीय युवाहरुको नेतृत्वमा कोभिड १९ कोरोना भाइरस सम्बन्धि जनचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको क्लवका अध्यक्ष नरेन्द्र अमात्यले जानकारी दिए ।
‘घर आगन सफा राखौ, कोरोना जस्ता भाइरस भगाऊ’ भन्ने नाराका साथ स्थानीयहरुले बजारको सरसफाई गरेका हुन् । वडाध्यक्ष रंजितले स्थानीय युवा र स्थानीयवासीहरुको समन्वयमा वडामा सरसफाई तथा जनचेतना मुलक कार्यक्रम गर्नु धरै राम्रो भएको बताए ।
उनले आफ्नो तर्फवाट केही सहयोग गर्न पाउँदा आफू हर्षित रहेको समेत व्यक्त गरे । त्रिशूली सामाजिक क्लबलाई सरसफाइका लागि आवस्यक पर्ने सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरिएको हो ।
मन्दिरको अध्यक्षद्वारा सिलान्यास
नुवाकोटको दक्षिणी भेगमा रहेको तारकेश्वर गाउँपालिका–४ को पौवाभञ्ज्याङमा श्रीकृष्ण मन्दिरको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । मन्दिरको आइतबार गाउँपालिका अध्यक्ष रमेशबहादुर वस्तीले सिलान्यास गरेका छन् ।
मन्दिर शिलान्यास गर्दैै गाउँपालिकाका अध्यक्ष वस्तीले मन्दिर निर्माणका लागि आफुले व्यक्तिगत तथा पलिकाबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे । उपभोक्ताहरुको पहलमा निर्माण सुरु भएको मन्दिरको आर्थिक स्रोत र साधन भने विभिन्न व्यक्ति, संघसस्था, समुदायबाट सहयोग लिई निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको मन्दिर निर्माण समितिले जनाएको छ ।
समितिका सदस्य शैलेश बुढाथोकीले मन्दिर निर्माणमा सहयोग गर्न विभिन्न व्यक्ति, संघ संस्था, जनसमुदायहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सिलान्यास कार्यक्रममा वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष राममणी अधिकारीलगायत विभिन्न सरोकारवालाले वजेटलाई विकासमा केन्द्रीत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कृषि वजारीकरणका लागि भवन निर्माण सुरु
कृषि वजारीकरण गरि किसानहरुको जीवनस्तर उाकस्ने उद्धेश्यले नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका ५ खोलेवेशीमा रहेको नमूना मैत्रि कृषक समुहको भवन निर्माण सुरु गरिएको छ । भवनको प्रतिनिधिसभाका सांसद वहादुरसिंह लामातामाङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रवहादुर लामा र सहकारीका अध्यक्ष कमानसिंह लामाले संयुक्त रुपमा सिलान्यास गरैसंगै निर्माण सुरु भएको छ ।
कुल २९ लाख ८३ हजार ४८ रुपैयाँमा बन्न लागेको भवनमा किस्पाङ गाउँपालिकाले १२ लाख रुपैयाँ, स्थानियबासीको श्रमदानबाट ५ लाख ९६ हजार ७ सय ४८ रुपैयाँ जुटाइने सहकारीका अध्यक्ष कमानसिंह लामाले जानकारी दिए । भवन शिलान्यास कार्यक्रममा सांसद लामाले भवन निर्माणसँगै किस्पाङबासीका कृषि उत्पादनहरुले बजार पाउने बताए ।
स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणको लागि सडक संजालले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने जनाउंदै सडकको स्तरोन्नतिमा समेत ध्यान दिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्र लामाको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद लामाले नुवाकोट तरकारीको पकेट क्षेत्र भएकोले यसको व्यवसायिक उत्पादन गरि बजारीकरण गर्न सके कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्न सकिने बताए ।
किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रवहादुर लामाले गाउँपालिकाले कृषि र पशुपक्षींलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको बताए । गाउँपालिका नगदेबालीको लागि जिल्लाकै उत्कृष्ट ठाउँ रहेको भन्दै त्यसको भरपुर फाईदा स्थानीयले लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
किस्पाङ ५ का वडाध्यक्ष नरहरी भट्टले कृषिको अनिवार्यतालाई आत्मसाथ गर्दै पुरै गाउँपालिकालाई केन्द्रमा राखेर कृषक समूहको भवन निर्माण गर्न लागिएको बताए । गाउँपालिका र स्थानीयको सहकार्यमा निर्माण हुन लागेको सहकारीको भवनले आफुहरुको माग र आवश्यकतालाई पुरा गर्ने भन्दै स्थानियबासीहरुले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
भवन साढे दुई महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने भवन ४ कोठाको रहने छ ।